Diyaaradda Diyaaradaha ee Tayaran Jet Diyaar ayey u tahay Duulimaad
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaaradda Diyaaradaha ee Tayaran Jet Diyaar ayey u tahay Duulimaad
Airlines • Jebinta Wararka Safarka • Italy War Deg Deg Ah • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Xiriirinta Bologna ee ka kala socda Catania, Palermo, iyo Comiso oo ay maamusho Tayaran Jet, oo Talyaanigu leeyahay Xamuulka Bulgaariya taas oo u dooratay jasiiradda inay noqoto xarunta mashruucdeeda horumarineed, waxay bilaabmi doontaa 20-ka July.
3 The Sisiiliyaan garoomada diyaaradaha gaar ahaan waxaa lagu xiri doonaa caasimada Emilia iyadoo isbuucyo laga soo qaado magaalada Etna 5 maalmood usbuucii laga bilaabo caasimada Sicilian iyo isbuucii labo jeer laga bilaabo garoonka diyaaradaha Hyblean.
Laga soo bilaabo Catania sidoo kale waa suurtagal in loo duulo Rome (maalin kasta) iyo Sofia, laba jeer usbuucii.
“Laga bilaabo maanta, waa suurtagal in la ballansado duulimaadyada. Waxaan abuurnay Tayaran Jet 3 sano ka hor, sannadihii la soo dhaafay waxaan qaabeynay nafteena samaynta maalgashiyo badan. Had iyo jeer waxaa jira hadal ah in dib loo bilaabayo, waxaanan isku dayeynaa inaan bixino calaamado dhab ah, oo aan xidid ku yeelano dhulka oo aan kor u qaadno. ”
"Waxaan dooneynaa inaan ku xirno Sicily qaaradda iyo Bariga Yurub, sababtaas awgeed waxaan halkaan diyaar ugu nahay inaan ku khamaarno," ayuu yiri Maamulaha Dalka ee Talyaaniga, Gianfranco Cincotta.